Dawooyinka - InfoFinland
Nolosha Finland > Caafimaadka > Dawooyinka
Finland waxaa daawooyinka laga iibsan karaa farmashiyayaasha. Daawooyinka la isku daryeelo sida daawooyinka xanuunka waa la iibsan karaa iyagoo aanu dhakhtar qorin. Si kastaba ha ahaatee daawooyin badan ayaa u baahan in dhakhtar kuu qoro rijeeto ka hor inta aadan soo iibsan. Tusaale ahaan daawooyinka antibiyootiga ah waa kuwa uu dhakhtar qoro.
Warqadda daawada waxaa qora dhakhtar. Kalkaaliyayaasha caafimaadka qaarkood waxay xaq u leeyihiin in ay qoraan daawooyin cayiman.
Haddii aad qabto xanuunada waqtiga dheer ah, horay u qaado rajeetadii hore markii aad dhakhtarka la kulmeysid, markaas dhakhtarku wuu tixgelinayaa markii uu warqada daawada kuu qorayo.
Warqada daawadu waxay shaqaynaysaa labo sano, markii laga bilaabo maalintii la qoray. Haddii aad haysato warqad daawo oo dalka dibadiisa lagaaga soo qoray, dalka Finland kama shaqaynayso. Waxaa ka baxsan rijeetooyinka laga soo qoray wadan kale oo ka mid ah wadamada Waqooyiga Yurub iyo yurubiyaanka daawadey qoreen. Kuwaas Finland way ka shaqaynayaan. Daawooyinka ay yurubiyaanka qoreen waa inaad si gaar ah u weydiisaa dhakhtarka. Yurubiyaanka daawooyin waxaa qori kara oo keliya wadamada EU-ga ama Eta-ga ama Switzerland ku xirfadoodu tahay ama ku shaqeeya cilmiga caafimaadka heystana shatiga qorista daawooyinka.
Baakadka daawada waxaa lagu calaamadeeyey maalinta ugu dambeeya oo la isticmaali karo. Haddii daawadu ay duqowdo, lama isticmaali karo. Ha tuurin daawooyinka dhacay, balse mar walba u celi farmashiga (apteekki), sababtoo ah waa haraa dhibaato leh.
Macluumaad la xiriira waxyaabaha dawooyinka laga sameeyeyFinnish
Resebtiga elektoroonigaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Xagee daawooyinka laga heli karaa?
Daawooyinka waxaa laga soo iibsan karaa farmashiga. Sidoo kale farmashiyeyaasha yar yar iyo baraha adeega farmashiyeyaasha iyo sidoo kale adeega internetka oo ka mid ah adeegyada farmashiga. Dalka Finland daawooyinka laguma iibin karo meelo kale. Vitamiinada iyo dawooyinka dhirta waxaa lagu iibiyaa dukaamada.
Farmashiyeyaashu waxay sida badan furan yihiin subaxdii ilaa galabtii. Magaaloyinka waaweyn waxaa dhici kara inay jiraan farmashiyeyaal furan goor dambe habeenkii. Bogga internetka ee Ururka farshiyeleyda (Apteekkariliitto) waxaad ka raadin kartaa macluumaadka la xiriiraa farmashiyeyaasha magaaladaada iyo waqtiyada ay furan yihiin.
Waxaa suurtogal ah in markii aad farmashiga tagto aad dawadii laguu soo qoray ku badalato daawo kale oo ka raqiisan, haddii labada dawo maadooyinka dawada ah oo ku jira ay isku mid yihiin. Shaqaalaha farmashiga ayaa macaamiisha u sheega haddii ay jirto dawo la mid ah oo ka qiimo jaban.
FarfmashiyeyaashaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush
Magdhawga ay Keladu ka bixiso dawooyinka
Haddii aad ku jirto xayndaabka caymiska jirrada ee Finnishka Kelada ayaa bixinaya qayb kamida qiimada daawada. Keladu wax magdhaw ah kama bixinayso dawooyinka aad warqad la'aanta ku iibsaneyso. Magdhowga waxad heli kartaa ka dib markaa ay kuu buuxsanto inta hore ee qofku isagu ka mas’uulka yahay, intaasi waxay buuxsamaysaa marka aad dawooyinka la magdhabayo aad ku isticmaasho 50 yuuro sannadkii. Qaybta qofku ka mas’uul yahay inuu iska bixiyo ee hore ma khusayso carruurta. Waxaa nidaamka laguu isticmaalayaa billowga sannadka aad 19 sano buuxisay.
Farmashiga ayaa ku siinaya magdhawga. Lacagta magdhawga waxaa laga jarayaa qiimaha daawada ee aad siineysid farmashiga. Sidoo kale magdhawga dib ayaa foom loogu dalban karaa. Ku lifaaq foomka dalabka xisaabta daawo iibsiga aad farmashiga ka heleysid iyo rasiidka ay ku siisay qasnadii aad lacagta ka dhiibtay.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan, yaa ku jira xayndaabka caymiska jirada ee Finland, waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Badbaada Bulshada ee Finland.
Magdhawga daawooyinkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Dawooyinka dibada laga keeno
Dawooyinka qaarkood isticmaal ahaan waad ka soo qaadan kartaa dalka Finlan dibadiisa. Si kastaba ha ahaatee keenitaanka waxaa la socda xadeymo. Xadeymahaad waxaa saameyn ku yeelanaya, dawo noocee ah ay su’aashu tahay iyo wadankee ayaad daawada kala imaanaysaa. Sidoo kale waa inaad awood u leedahay inaad ku cadayso, warqada dhakhtarka ama shahaado dhakhtar kuu soo qoray, in dawada loogu talogalay isticmaalkaaga.
Inta aadan daawada la imaadka Finland, baar xadeynta daawada ee dalka Finland. Sidoo kale ii baar xadeynta haddii aad dooneysid inaad daawo dibada ka dalbato oo boosto ahaan laguugu soo diro dalka Finalnd.
Wadamada Aaggga Dhaqaalaha Reer Yurub waxaad kasoo qaadan kartaa intaad shakhsi ahaan u isticmaaleysid, oo u dhiganta daawada aad isticmaali kartid hal sano. Boosto ahaan waxaa wadamada aaga dhaqaalaha yurub ugu dalban kartaa qadar daawo ah oo la isticmaali karo ugu badnaan sadex bilood.
Wadamada Aaga Dhaqaalaha Reer Yurub dibadooda waxaad kala imaan kartaa oo Finland la soo geli kartaa qadar daawo ah oo loogu talogalay isticmaal shakhsiyadeed, una dhiganta wax la isticmaali karo mudo sadex bilood ah. Sida uu sharcigu qabo daawo boosto ahaan loogama dalban karo meel ka baxsan Aagga Dhaqaalaha Reer Yurub.
Haddii daawada lagu tiriyo inay tahay maado maandooriye ah, waxay leedahay xadeyn adag.
Haddii aadan hubin, in daawooyinka qaar la keeni karo Finland iyo in kale, wixii warar dheeraad ah weydii kastamka ama waaxda canshuuraha xuduudaha (Tulli). Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa Xarunta nabadgelyada qaybaha ganacsiga dawooyinka iyo horumarinta ee Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea) iyo bogga internetka ee kastamka.
Haddii aad dawooyinka dibada ka dalbanaysid, dawooyinka kharashkooda kuuma celinayo xafiiska caymiska hawlgabka qaranku (Kela).
Wadamada ku jira ururka midowga yurub dhexdooda waxaa ka shaqeeya farmashiyeyaal xagga internetka ah, kuwaas oo aad ka iibsan kartid dawooyinka aan u baahnayn in dhakhtar kuu qoro.Si kastaba ha ahaatee tukaamada dawooyinka ee internetka intooda badan waa sharci daro. Waxay kaloo caafimaadka ku ahaan karaan khatar inaad dawooyin ka iibsato tukaamada internetka oo sharci darada ah.
Dawooyinka shakhsiyadeedFinnish | Iswidish | Ingiriis
Keenitaaka dawooyinka ee dalka FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis
Tukaanka dawooyinka ee internetkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 21.12.2021 Boggan war-celin ka soo dir